KBC Singapore – ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း? ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း? – KBC Singapore ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း? – KBC Singapore
Home / Sermon / ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း?
ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း?
Sermon From - Sara Zinghang Gam Htun Bible Passage - ရွင္ေယာဟန္ ၁၆:၁၃
၁၃ သမ္မာတရား နှင့် ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည် ရောက်လာသောအခါ၊ သမ္မာတရားကို သင်တို့အား အကြွင်းမဲ့ သွန်သင် ပြသလိမ့်မည်။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ကိုယ်အလိုအလျောက် ဟောပြောမည်မဟုတ်။ ကြားသမျှ တို့ကို ဟောပြောလိမ့်မည်။ နောင်လာလတံ့သောအရာတို့ကိုလည်း သင်တို့အားဘော်ပြလိမ့်မည်။
13 Rai ti mung, dai teng man ai Wenyi du sa jang, shi gaw teng man ai lam yawng mayawng nanhte hpe madun na ra ai: dai wa gaw shiamyit hte tsun na ra ai n rai; na la lu ai hte made tsun dan na ra ai: htawm hpang de byin na ra ai lam mung, shi nanhte hpe tsun dan na ra ai.
Yesu A Shagrit Shanem Madat Mara Ai Lam
Kamsham Ai Ni A Lusha Hpawng
Karai Kasang gaw de ai dinghku
N mu timung, Kam Sham ai ni gawalu ma ai
Hkristu hta asi si ai asak hkrung lam
© 2019 KBCS. All rights reserved.